Mayelana nomlando wethu
Selokhu kwasungulwa ifektri, inkampani yethu isidlulile eminyakeni eyi-12 yehla yenyuka, sithembela eqenjini eliphakeme, imishini emihle kakhulu, ukuphathwa okuhle ukuthekelisa imikhiqizo yethu yamasinki engagqwali kuzo zonke izingxenye zomhlaba, kufaka phakathi i-Asia, i-Afrika , iMiddle East, eningizimu Melika i ...
Ubungazizwa kanjani lapho usunamazinga aphezulu?
Ukwenza isidlo sasekuseni esimibalabala, isidlo sasemini esilungiselelwe kahle noma isidlo sothando sedwa, uhleli nomndeni wakho nabangane futhi uxoxa nabo, impilo ihlanganiswa ngezigcawu ezinjengalezi, ezenza abantu bakujabulele. Esikhaleni esifudumele sekhishi, ukucwila okusebenzayo futhi obucayi kufanele kube yisisulu ...
Ekuqaleni konyaka omusha ngo-2020, igciwane elisha le-corona laholela ebangeni lokuqubuka kwamaphaphu, elaligcwele ngejubane elimangazayo, futhi lasakazeka ngokushesha ukusuka eWuhan laya ezweni lonke. Okwesikhashana, iWuhan kanye nesiFundazwe saseHubei besisenkingeni! Impi yokumelana nalesi sifo ibangelwe ...